Mede Yehowa Som Yɛɛ M’adwuma | Asetenam Nsɛm
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mede Yehowa Som Yɛɛ M’adwuma
Bill Walden anom asɛm
Bere a miwiee ntoaso sukuu January 1937 no, minyaa kwan wɔ Iowa State Sukuupɔn mu, na na ɛhɔ bɛn baabi a yɛte wɔ United States mfinimfini mantam mu no. Me ara na na meyɛ adwuma hwɛ me ho sukuu, enti na minnya me ho twabere koraa. Meyɛ akwadaa nyinaa adan atenten ne atwene akɛse na na mepɛ sɛ misua ho ade.
Afe 1942 ahyɛase pɛɛ a United States de ne ho hyɛɛ Wiase Ko II mu no, na aka kakra ama matwa mfe anum wɔ sukuupɔn adesua no mu, na na aka kakraa bi ama me nsa aka adansi abodin krataa. Ofie a mete mu no, na me ne nnipa baanu na ɛda dan mu. Ná yɛn dan wɔ soro, na da koro, nnipa a me ne wɔn wɔ dan mu no biako ka kyerɛɛ me sɛ menkɔ ase hɔ nkohu obi a ɔtaa ba mmerante bi nkyɛn. Enti mikohuu John O. (Johnny) Brehmer; ná ɔyɛ Yehowa Dansefo. Ɛrekame ayɛ sɛ asɛm biara a mibisae no, otumi de Bible yii ano, na ɛyɛɛ me nwonwa paa. M’ani gyee ɔkwan a Johnny faa so kyerɛkyerɛe no ho, enti mifii ase ne no suaa Bible, na ewiee ase no na me ne no kɔ asɛnka.
Bere a Johnny papa Otto bɛyɛɛ Ɔdansefo no, ɔno na na ɔda sikakorabea bi ano wɔ Walnut, Iowa. Nanso, ogyaee adwuma no de bere pii yɛɛ asɛnka adwuma. Bere a mihuu sɛnea na ɔne n’abusua nyinaa bɔ wɔn ho mmɔden no, ɛkaa me ma misii gyinae kɛse bi.
MISII GYINAE KƐSE BI
Da koro, ɔpanyin a ɔda sukuupɔn no ano no ka kyerɛɛ me sɛ m’adesua rekɔ fam, na sɛ manyere me ho a, wɔrenhwɛ nea mayɛ atwam ho mma me abodin krataa. Mekae sɛ mebɔɔ Yehowa Nyankopɔn mpae denneennen sɛ ɔnkyerɛ me kwan. Ankyɛ pii na wɔkae sɛ minkohu ɔbenfo a ɔkyerɛ me ade no. Mekɔe no, ɔka kyerɛɛ me sɛ wanya krataa sɛ adwumakuw bi rehwehwɛ adansi ho nimdefo ne no ayɛ adwuma. Ɔkae sɛ, wɔn a wɔde krataa no bae no, wama wɔn ho mmuae sɛ mɛyɛ adwuma no. Medaa ɔbenfo no ase, na mekyerɛkyerɛɛ mu kyerɛɛ no nea enti a mepɛ sɛ mede Yehowa som mmom yɛ m’adwuma. June 17, 1942 mu no, wɔbɔɔ me asu, na ankyɛ koraa na mebɛyɛɛ daa ɔkwampaefo; saa na wɔfrɛ Yehowa Dansefo a ɔde bere pii ka asɛmpa no.
Afe 1942 mu no, me nsa kaa krataa sɛ memmɛyɛ sraani, na mekɔɔ mpanyimfo anim kɔkyerɛɛ nea enti a mintumi nkɔ ko. Mede nkrataa a edi adanse sɛ meyɛ nipa pa na maben wɔ adansi mu kyerɛɛ wɔn. Adanse pa no nyinaa akyi no, wɔbɔɔ me ka dɔla 10,000 (U.S.) san kae sɛ wɔmfa me nto afiase mfe anum wɔ Leavenworth, Kansas, U.S.
Sei na Leavenworth afiase a ɛwɔ U.S. no te nnɛ. Wɔde yɛn mu nnipa bɛyɛ 230 koguu hɔ
Wɔde Adansefo mmerante bɛboro 230 koguu Leavenworth afiase hɔ, na na wɔma wɔyɛ adwuma wɔ afuw bi mu. Afiase awɛmfo no na na wɔhwɛ kyerɛ obiara adwuma a ɔbɛyɛ. Awɛmfo no bi wɔ hɔ a, na wonim sɛ Yehowa Adansefo nkɔ ko, na na wɔte yɛn ase.
Ná yɛtaa hyia sua Bible wɔ hɔ, na na awɛmfo no binom di boa yɛn. Wɔboaa yɛn nso ma yetumi nyaa Bible ho nhoma wɔ afiase hɔ. Afiase ahwɛfo no bi mpo kraa Consolation a seesei a yɛfrɛ no Awake! no.
MIFII AFIASE, NA MEBƐYƐƐ ƆSƐMPATRƐWFO
Wɔkae sɛ menkɔda mu mfe anum, nanso midii mfe abiɛsa no, woyii me February 16, 1946. Saa bere no, afei na na Wiase Ko II no aba awiei. Ntɛm ara na mesan bɛyɛɛ ɔkwampaefo de bere pii yɛɛ asɛnka adwuma no. Wotuu me sɛ mensan nkɔyɛ asɛnka adwuma no wɔ Leavenworth, Kansas. Ná misuro sɛ mɛsan akɔ hɔ efisɛ na nnipa bebree kasa tia Yehowa Adansefo wɔ hɔ. Adwuma a menya ayɛ adidi nso, na ayɛ asɛm. Ɔdan asɛm koraa de, na ɛkyɛn.
Mekae sɛ da koro, na mereyɛ afie afie asɛnka na mekɔtoo obi a na ɔhwɛ yɛn so wɔ afiase, na ɔteɛteɛɛ me sɛ: “Fi me fie ha kɔ!” Bere a mihui sɛ okura dua bi wɔ ne nsam no, ɛhɔ ara na mepɛɛ baabi fae. Mesan kɔɔ fie foforo mu kɔtoo maame bi, na obuee ne pon ka kyerɛɛ me sɛ: “Twɛn na mereba,” ɛnna ɔtoo pon no mu. Migyinaa hɔ twɛn no; nea metee ara ne sɛ wabue mpomma bi wɔ soro hɔ ahwie nsufi abegu me so waa. Ne nyinaa akyi no, m’adwuma a meyɛɛ wɔ hɔ no anyɛ kwa. Akyiri yi, metee sɛ nnipa a memaa wɔn Bible ho nhoma no bi bɛyɛɛ Adansefo.
Afe 1943 mu no, wɔtee sukuu bi a wɔde bɛtete asɛmpatrɛwfo wɔ New York, na wɔfrɛɛ me sɛ menkɔ sukuu no bi. Mekɔɔ adesuakuw a ɛto so du, na yewiee sukuu no February 8, 1948 mu. Akyiri yi, wɔfrɛɛ sukuu no Ɔwɛn-Aban Gilead Bible Sukuu. Miwiei no, wɔde me kɔɔ Gold Coast; seesei wɔfrɛ hɔ Ghana.
Mikoduu Gold Coast no, wɔde hyɛɛ me nsa sɛ menka asɛmpa no nkyerɛ aban mpanyimfo ne Europefo a wɔwɔ hɔ. Sɛ edu nnawɔtwe awiei a, na me ne Yehowa Adansefo asafo biako yɛ adwuma na meboaa emufo wɔ afie afie asɛnka adwuma no mu. Adansefo a na wɔnte mmɛn kurow mu no nso, na mekɔ wɔn nkyɛn kɔboa wɔn wɔ asɛnka adwuma no mu sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn ho bɛkokwaw. Ivory Coast a ɛnnɛ wɔfrɛ hɔ Côte d’Ivoire no nso bɛn hɔ, na na mesan yɛ ɔhwɛfo kwantufo wɔ hɔ.
Misuaa Afrikafo asetena wɔ me dwumadi no mu. Metenaa dɔtedan mu, na na mede me nsa didi, na mikogya m’anan wɔ “mfikyiri” te sɛ Israelfo no. (Deuteronomium 23:12-14) Asɛmpatrɛwfo a na wɔne me wɔ hɔ no nso suaa Afrikafo asetena, na ɛno maa nkurɔfo pɛɛ yɛn asɛm. Kurom hɔ mpanyimfo bi yerenom penee so ma yɛne wɔn suaa Bible. Enti bere a nkurɔfo tan yɛn ani na wɔyɛ maa aban kae sɛ yemfi ɔman no mu no, mmea yi de asɛm no guan wɔn kununom ho araa ma wɔdan gyinaesi no!
Asɛmpatrɛwfo a wɔba Afrika de, yare a ɛtaa bɔ wɔn ne atiridii, na ankyɛ na me nsa kaa me de. Me ho wosow biribiribiri, na ɛtɔ da bi a na m’ani so ayɛ me krakra. Ɛtɔ da bi mpo a, na ɛsɛ sɛ miso m’apantan sɛnea ɛbɛyɛ a ɛrenwosow. Ne nyinaa akyi no, asɛnka ma minyaa anigye ne abotɔyam.
Mihyiaa Eva Hallquist ansa na merefi United States, na mfe anan a edi kan a midii wɔ Afrika no, na me ne no di nkitaho nkakrankakra. Metee sɛ wakɔ Gilead Sukuu adesuakuw a ɛtɔ so 21 no ma ɔrebewie sukuu no July 19, 1953. Wɔn adesua awiei dwumadi no, na wɔbɛyɛ wɔ Yehowa Adansefo amanaman ntam nhyiam bi ase wɔ Yankee Stadium, New York. Ná suhyɛn bi rekɔ United States, enti mikohuu hyɛn no panyin ne no kae sɛ ɔmma mentena mu bi na menyɛ adwuma mfa nte ka no.
Yɛn akwantu no dii nnafua 22, na ɛtɔ da a na ɛpo no huru kitikiti. Yedui no, mikohuu Eva wɔ Yehowa Adansefo adwumayɛbea ti wɔ Brooklyn. Yɛkɔtenaa dan bi atifi; sɛ wote hɔ a wuhu New York mpoano kɔ akyirikyiri. Ɛhɔ na mede too n’anim sɛ mepɛ sɛ meware no. Akyiri yi, Eva bɛkaa me ho wɔ Gold Coast ne me bɛsomee.
Me ne Eva som mfe pii wɔ Afrika kosii bere a me maame kyerɛw me sɛ kokoram ayɛ me papa ma ɔrewu. Me ne Eva srɛɛ kwan, na yɛsan kɔɔ United States kɔhwɛɛ no. Paapa yare no mu yɛɛ den paa, na ankyɛ na owui.
Bere a yɛsan kɔɔ Ghana no, bɛyɛ mfe anan akyi na me maame nso yaree denneennen. Yɛn nnamfo bi kae sɛ me ne Eva nsan nkɔ fie nkɔhwɛ no. Ná ɛyɛ den ma yɛn paa. Ná mayɛ asɛmpatrɛw adwuma mfe 15, na emu 11 de, yɛn baanu nyinaa na yɛboom yɛe. Nanso kɔ ara na na ɛsɛ sɛ yɛsan kɔ United States.
Yekohyiaa ɔhene bi wɔ Gold Coast; seesei wɔfrɛ hɔ Ghana
Yɛde mfe pii hwɛɛ me maame; oyi tena ne ho kakra a, na oyi nso atena ne ho kakra. Da a n’ahoɔden betumi no, na yɛde no kɔ asafo nhyiam. January 17, 1976 na aberewa no wui; saa bere no na wadi mfe 86. Nanso akyiri yi, asɛm a ɛtoo me no, na ɛyɛ den sen eyi koraa. Kokoram yɛɛ Eva. Yɛyɛɛ biara nso yare no ankɔ, na June 4, 1985 no, yare no de no kɔe; odii mfe 70.
MAYƐ ADWUMA PA, NA NSAKRAE PII NSO ABA
Afe 1988 mu no, na wɔasi [Yehowa Adansefo] adwumayɛbea foforo wɔ Ghana, na bere a wɔrebehyira dan no so no, wɔtoo nsa frɛɛ me ma mekɔɔ bi. Ná ɛyɛ anigye da sɛ! Efi bere a miwiee Gilead adesua kɔɔ Ghana besi saa da no, na mfe 40 atwam. Mekɔɔ hɔ foforo no, na Adansefo a wɔwɔ hɔ nnɔɔso. Nanso eduu afe 1988 no, na wɔboro 34,000, na ɛnnɛ aka kakra sɛ wɔadu 114,000!
Mekɔsraa Ghana no, mfe abien akyi na mewaree Eva adamfo paa Betty Miller August 6, 1990. Me ne no nyinaa de Yehowa som ayɛ yɛn adwuma abesi nnɛ. Yɛn ani da so sɛ daakye owusɔre no ba a, yebehu yɛn nananom, yɛn awofo, ne Eva bio wɔ Paradise.—Asomafo Nnwuma 24:15.
Ɛyɛ akwannya kɛse paa sɛ Yehowa de me ayɛ adwuma wɔ ne som mu mfe 70 a abɛsen kɔ yi mu, na sɛ midwen ho a, na m’ani ataataa nusu. Metaa da no ase sɛ waboa me ama mede ne som ayɛ m’adwuma. Seesei meboro mfe 90 koraa, nanso ɔdansifo a ɔsen obiara, Yehowa, ama me ahoɔden ne akokoduru na ama matumi de ne som ayɛ m’adwuma abesi nnɛ.